News 18 Nepal || यौनपिपासुहरूलाई फाँसी दिने कानुन बनाउन किन हिचकिचाउँछ सरकार ?
राधा पोखरेल । प्रिय बहिनी गुलाब ! पुनः एक पटक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली ! बलात्कारपछि तिम्रो शव हत्या गरेर बोरामा पोका पारेर फालेको अवस्थामा सोमबार राति भेटिएको थियो ।
बर्दिवास नगरपालिका–१४ का तिम्रा आमा-बा आँशुमा डुबेका छन् । तिम्रो न्यायको निम्ति तिम्रा परिवार अहोरात्र भौंतारिएका छन् । तिम्रा बा-आमा रूँदारूँदा सुकेर सिठ्ठो भइसक्नुभयो । हामी सबै तिम्रो शोकमा कान्तिहीन भएका छौं । तस्वीरहरूमा जब म तिम्रो ६ बर्षे कल्कलाउँदो शरीर देख्छु, निर्दोष अनुहारमा निश्चल मन्द मुस्कान हेर्छुस् तब म पागल हुन्छु ।
बलात्कारी हत्याराले तिम्रो स्वणिर्म सपना सधैँका लागि समाप्त गरिदियो । समाजमा एउटा भयानक सन्त्रास पनि रोपिदियो । साँच्चै गुलाब ! यो समाजमा खरपाखोको डढेलोझैँ फैलिरहेको बलात्कार, हत्या, महिला हिंसा देखेर हामी बाँचेका सबै नारीहरू सन्त्रस्त छौं ।
खास गरी किशोरीहरू बलात्कृत हुने र हत्या गरिने मुटु चिमोट्ने समाचारहरू प्रत्येक दिन जसो आइरहेका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको समाचार त अन्तरराष्ट्रिय नै बन्न पुग्यो । सरकारले बलात्कारी, हत्यारालाई अहिलेसम्म गिरफ्तार गर्न सकेको छैन । यस्ता दुःखद घटनाले नेपाल र नेपालीको शीर अन्तरराष्ट्रियरूपमै झुक्न पुगेको छ । विश्वसामु हामी नेपालीको बेइज्जत भएको छ ।
नारी हुनाको नाताले देशमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायधीश र उद्योग वाणिज्य महासंघको सभापति महिला भएकोमा कति धेरै गर्व गरेकी थिएँ । अहिले पनि गर्व नै गरिरहेकी छु । तर, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू ! बलात्कार, हत्या, एसीड आक्रमण र महिलाहिंसाको त कुरै नगरौं । यी ‘महान काम” कहिले भएको थियो महामहिमयज्यू ? रिसानी माफ होस् ।
यस्तो बेलामा हजुर पनि नारी हुनाको नाताले हामी नारीहरूको सुरक्षालाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, त्यतातिर पो गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने होइन र ? “छाउगोठमा सुतिरहेका युवती सर्पले डसेर मृत्यु हुने क्रम अझै पनि रोकिएको छैन । तेजाब आक्रमणको आतंक पनि घटेको छैन । जताततै महिला हिंसाका घटना भइरहेका छन् । हिंसा घट्नुको साटो बढिरहेको छ । असुरक्षाको आतंकले हामी नेपाली नारीहरू मानसिक रोगी बन्दै गइरहेका हुन्छौं ।
आजकल बैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरू अपमानित भएको, लुटिएको, बलात्कृत भएको, मारिएको खबरहरू सामाजिक सन्जाल र बिभिन्न सन्चार माध्यामहरूमा दिनहुँजसो आइरहन्छ । सम्झँदा मात्र पनि मूर्छा परिएला जस्तो हुन्छ । साँच्चै देश हेर्दा कहीँ, कतै चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । अहिले पनि मुटु काँपी रहेको छ ।
अन्तमा नागरिकहरू सधैँ निम्छरो बनिरहँदैनन् अब । न्याय पाउनु पर्छ । राज्यले नागरिकलाई न्याय दिनैपर्छ । हाम्रो सुरक्षा र न्यायको निम्ति हामी घर बाहिर निस्किसकेका छौं । हामी मैदानमा छौं ।